Hundeeffama | Ejensii Galmeessaa Ragaa Bu`uura Hawaasummaa Oromiyaa
Hundeeffama Ejensii Galmeessa Ragaa Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa
Akka biyya keenyaatti sirna galmeessa ragaalee bu’uura hawaasummaa diriree waan hin jireef taateewwan bu’uura hawaasummaa jedhamani beekaman kara itti fufinsaa fi qulqullina qabuun galmeessani bu’aa galmeessa kana irra argamus, galtee imaammata, karooraa fi tarsimoo taasifame dhimmaa itti bahamaa hin ture. Sababaa kanaanis, karoorri hawaasummaa, diinagdee fi siyaasa sadarka garagaraatti qopha’a ture ragaa qabatamaa fi qulqulluu ta’e irratti kan hunda’e osoo hin taane tilmaama irratti kan rarra’ee ture.
Gama biraatiin ammoo ragaan bu’uura hawaasummaa karaa itti fuffinsa qabuun galma’uu dhabuu isaatiin sirna haqaa mirkaneessuu fi mirga heeraan lammiileef kennaman karaa guutu ta’een hojirra oolchuu keessatti rakkoo guddaa umaa ture.
Kanaaf, rakkoo gama ragaalee bu’uura hawaasummaatiin jiru keessa bahuuf Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Oromiyaa bu’uura labsii mootummaa federaalaa lakkoofsa 760/2004 fi danbii mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 169/2006’n baaseen kan hundeeffame yoo ta’u, itti gaafatamummaa fi gahee hojii labsii fi danbii kannaan kennamef Hagayya bara 2008 irraa eegalee hojjachuu irratti argama.
Caaseeffama Mana Hojii
Mappii fi Kallattii
Home » WAA`EE KEENYA